Ny fiarovana ny Rhino Mainty tandindonin-doza any Tanzania dia mitondra dingana vaovao manampy ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Ny fiarovana ny Rhino Mainty tandindonin-doza any Tanzania dia mitondra dingana vaovao manampy ny fizahan-tany
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Fiarovana ny Rhino Mainty tandindonin-doza dia midika ho fiarovana ny fizahan-tany
Ny Area Conservation Ngorongoro ao Tanzania tamin'ity herinandro ity dia namoaka fomba fiarovana vaovao hamonjy ilay rhino mainty tandindonin-doza ao anatin'ny tontolo iainana sy ny faritra atsinanan'i Afrika Atsinanana. Miara-miasa amin'ny Minisiteran'ny Harena voajanahary sy ny fizahantany miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny Fikambanana Frankological Zoological Society (FZS), Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) izao dia miaro ny mponina rhino miaraka amin'ny marika manokana sy fitaovana elektronika ho an'ny fanaraha-maso ny onjam-peo mba hanarahana maso mora kokoa.
Badino folo no homarihina ao amin'ny faritra fitehirizana amin'ity volana ity.
Ny isan'ny rhino monina ao anaty ny Kawahin'i Ngorongoro dia nitombo ho 71, ka ny 22 lahy ary 49 ny vehivavy.
Ny rhinozianina rehetra monina ao Tanzania dia homarihina amin'ny isa hamantarana mialoha ny litera "U" hanavahana azy ireo amin'ireo any Kenya mpifanila vodirindrina aminy, ary marihina amina litera "V" alohan'ny isa biby tsirairay.
Ny isa ofisialy natokana ho an'ny rhino any Ngorongoro any Tanzania dia manomboka amin'ny 161 ka hatramin'ny 260, hoy ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny mari-pamantarana eo amin'ny sofina havia sy havanana an'ny rhino dia hapetraka, raha ny 4 amin'ny biby mampinono lahy dia hasiana fitaovana ho an'ny fanaraha-maso ny onjam-peo hanaraha-maso ny hetsik'izy ireo raha mizotra lavitra ny sisin-tany fiarovana.
Ny fiarovana ireo rhino mainty afrikanina ao Ngorongoro dia mitohy amin'izao fotoana izao raha ny manampahaizana manokana momba ny fiarovana dia miatrika olana mifandraika amin'ny fitomboan'ny asan'olombelona ao amin'ity faritra lova ity noho ny fitomboan'ny isan'ny olona miaina ny tontolo iainany miaraka amin'ny bibidia.
Vonjeo ny Rhino International, fikambanana mpanao asa soa miaro ny tontolo iainana (United Kingdom) (UK) miaro ny fiarovana ny rhino in situ dia nilaza tamin'ny tatitra farany nataony fa 29,000 20 fotsiny ny rhino tavela eto amin'izao tontolo izao. Nihena be ny isan'izy ireo tao anatin'izay XNUMX taona lasa izay.
Ireo mpikaroka avy ao amin'ny Foundation SigScript Foundation dia nanamboatra karazana rhinozika tany amin'ny faritra atsimon'i Afrika miaraka amina gadget manokana misy sensor mba hanarahana ny fihetsik'izy ireo mba hamonjy azy ireo amin'ny mpihaza, indrindra ny avy any Azia atsimo atsinanana izay tadiavina ny tandroka rhino.
Amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia ireo biby, ny mpikaroka dia afaka miaro azy ireo amin'ny mpihaza sy mahafantatra tsara kokoa ny fahazaran'izy ireo miaro, avy eo mifanakalo azy ireo hiteraka azy ireo, ao anatin'ny faritra arovana ary hitahiry farany ilay karazany.
Ny fikambanana Foundation Foundation dia miara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mpiaro ny bibidia miisa 3 lehibe indrindra hanitatra ny rafi-pitadiavana rhino miaraka amin'ireo sensor.
Ny dingana voalohany tamin'ny fitsapana ny fitsidihana ny rhino, nantsoina hoe "Now Rhino Speak," dia natao ny volana Jolay 2016 ka hatramin'ny febroary 2017 tany amin'ireo faritra miaro ireo rhino dia 450 any Afrika atsimo.
Any Afrika atsimo no misy ny 80 isan-jaton'ny Rhino sisa tavela eto an-tany. Miaraka amin'ny famotehan'ny vahoaka ny mpihaza, misy ny tena atahorana ny hamoy ny karazan-trondro amin'ny taona ho avy, raha tsy ny governemanta afrikanina no mandray fepetra lehibe hanavotana ireo biby mampinono lehibe ireo, hoy ny manam-pahaizana momba ny Rhino.
Ny rhino mainty dia anisan'ny biby be mpandroba sy tandindomin-doza indrindra eto Afrika miaraka amin'ny isan'izy ireo izay mihena amin'ny taha mampatahotra.
Ny fiarovana ny Rhino izao dia tanjona kendrena tadiavin'ireo mpiaro ny tontolo iainana mba hiantohana ny fahavelomany any Afrika taorian'ny fanjonoana poizina izay nanimba ny isany tao anatin'ny folo taona lasa.
Ny valan-javaboary Mkomazi any Tanzania izao no valan-javaboary voalohany any Afrika Atsinanana izay manam-pahaizana sy voatokana ho an'ny fizahan-tany rhino.
Manatrika ny Tendrombohitra Kilimanjaro any avaratra, ary ny Tsavo West National Park any Kenya any atsinanana, ny Valan-javaboary Mkomazi dia mirehareha amin'ny bibidia izay ahitana karazana biby mampinono mihoatra ny 20 sy karazam-borona 450 eo ho eo.
Tamin'ny alàlan'ny George Adamson Wildlife Preservation Trust, ny rhino mainty dia naverina tany amin'ny faritra arovana sy mimanda mafy ao anatin'ny Valan-javaboary Mkomazi izay mitahiry sy miteraka rhino mainty ankehitriny.
Ny rhino mainty afrikanina dia nafindra tany Mkomazi avy amin'ny valan-javaboary hafa any Afrika sy Eropa. Ny rhino mainty aty Afrika no biby nihaza indrindra nandritra ny taona maro izay miatrika loza lehibe amin'ny fanjavonany noho ny fangatahana be any amin'ny Farany Atsinanana.
Manodidina ny 3,245 kilometatra ny valan-javaboary Mkomazi dia iray amin'ireo valan-javaboary vao natsangana tao Tanzania izay iarovana ny alika dia miaraka amin'ireo rhino mainty. Ireo mpizahatany mitsidika ity valan-javaboary ity dia mety hahita alika dia izay isan'ireo karazana tandindonin-doza any Afrika.
Tao anatin'ny am-polony taona lasa, dia nandehandeha an-kalalahana teo anelanelan'ny tontolo iainana Mkomazi sy Tsavo ny rhino mainty, nanomboka teo amin'ny Tsavo West National Park any Kenya ka hatrany amin'ireo tehezan-tendrombohitra ambany Kilimanjaro.
Ny rhino mainty afrikanina dia karazana teraka monina any Atsinanana sy atsimon'i Afrika. Voasokajy ho karazana tandindomin-doza izy ireo ary manana karazan-karazany 3 farafahakeliny nambaran'ny Vondrona Iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny natiora (IUCN).